by Laura 09/04/2019
Talooyin safarka baabuur, Talooyin safarka tareenka, safarka Europe
Winter waa markii ugu fiican si ay u dhisaan dababka qodxo, si nabad ah ku dhacay dhaadhacyadii, dhiso snowmen iyo snuggle la koob fiican shaah. Nasiib darro, ma ahan oo dhan xiiso leh iyo ciyaaraha. Winter sidoo kale abuuraa qaar ka mid ah wadooyinka ugu Khaa'imiinta xaaladaha. Maxaa yeelay, ma ahan suurtagal ah in inta badan oo naga mid ah in ay qoboobaha ilaa guga, halkan waa talooyin aad u baahan tahay oo ku saabsan sida si ammaan halka baabuur-wadidda xilliga jiilaalka.
Tani waxay u muuqan yaabaa in la midbaa mid cad, laakiin waxaynu og nahay in aad mashquul iyo danayn si aad u hesho si aad u socoto ee soo socota tahay. Waxaan halkaan u joognaa inaan idin xusuusiyo in ay qaataan waxa ay u yarayso! One of our main tips on Sidee si ammaan halka baabuur-wadidda xilliga jiilaalka ogolaanaya waqti dheeraad ah si ay u yimaadaan aad u socoto. safarada qaadan kartaa waqti dheer inta lagu jiro xilliga qaboobaha badan xilliyada kale ee sannadka ka, gaar ahaan haddii aad la kulanto xaaladaha duufaan ama waddooyin baraf. Iyo baabuur-wadidda in hawadu xumaato waa walaac ku filan oo aan cadaadis ku daray inay noqoto mid soo daahay, oo hadhaysaa laga yaabaa in aad xukun driving ammaan.
Muraayada hore DIY dhaqe Dheecaan
Daawo this video on YouTube
Noqo Muuqata: Sido dhar midab dhalaalaya leh si antenna ee gaarigaaga ama meel maro sare ee daaqadda ka duubay oo astaan ​​u cidhiidhi. Habeenkii, sii iftiinka Xamar on haddii ay suuragal tahay. Waxaa isticmaalaa oo kaliya qadar yar oo ah korontada iyo ka dhigi doonaa fududeeyo samatabbixiyeyaasha in aad ka heli.
Nadiifi egsaaska: Hubi biibiile qaaca aan la dhaafiyay baraf, barafka ama dhoobo. A biibiile dhammayn xirmo wuxuu keeni karaa gaaska carbon monoxide dilaaga ah inay daadato galay qol rakaabka gaariga halka engine la socda.
joog diiran: Isticmaal wax kasta oo la heli karo si jirkaaga dahaar ka qabow ah. Tani waxay ka mid noqon kara sariiro dabaqa, wargeysyada ama maps warqad. Pre-pack bustayaal iyo dhar culus ay u isticmaalaan in ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Maxaa dhacaya haddii ay ahayd hab aad ka fogaato lahaa dhammaan kaaftoomi kor ku joogista ammaan ah halka baabuur-wadidda? Haddii kaliya waxaa jiray hab ka mid ah gaadiidka oo aad ku boodaan yaabaa gal, iyo aad u hesho si aad u socoto si deg deg ah iyo si ammaan ah. Oh sugaan, waxaa jira! Waxaa loo yaqaan tareen!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/safe-driving-during-winter/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan -- https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / TR si / de ama / iyo luuqado badan.
safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, safarka tareenka Norway, safarka tareenka Switzerland, safarka Europe
safarka tareenka, safarka tareenka Austria, safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, safarka Europe